Aix Arome Cafe Kafeega - Joornaalka Naqshadeynta
Kafeega Kafeega waa meesha booqdayaashu ay dareemaan inay ku wada noolyihiin badaha. Qaab dhismeedka ukunta weyn ee lagu meeleeyay meel dhexaadka u ah ayaa si isku mid ah ugu shaqeynaya sidii khasnaji ahaan iyo bixinta qaxwada. Muuqaalka muuqaalka ah ee buulku waxa dhiirrigeliyay digirta qaxwaha oo madmadow iyo caajis ah. Laba furitaan oo waaweyn oo ku yaal dhinaca hore ee labada qaybood ee “digirta weyn” waxay u adeegaan sidii hawo wanaagsan iyo hawo dabiici ah. Café waxay bixisay miis dhaadheer sida noocyo badan oo octopuses ah iyo xumbo gabi ahaanba. Chandeliers-ka sida muuqata aan kala sooca lahayn ayaa u eg aragtida kalluunka ee dusha sare ee biyaha, dhaldhalaalaha qurxoon waxay nuugaan iftiinka qoraxda ee cirka.
Magaca mashruuca : Aix Arome Cafe, Magaca naqshadeeyayaasha : One Plus Partnership Limited, Magaca macmiilka : Aix Arome Coffee Co. Ltd..
Kafeega One Plus Partnership Limited Aix Arome Cafe